Mpamatsy voajinja katsaka / varimbazaha / varimbazaha sy mpamokatra - Fambolena sinoa / varimbazaha / famokaram-bary
Miady amin'ny vokatra mpijinja ny varimbazaha miasa ho azy
Antsipirian'ny vokatra 4LZ-7 / 4LZ-8 mpijinja mitambatra tena no ampiasaina amin'ny fijinjana varimbazaha, ary afaka mioty vary ihany koa. Ny milina dia afaka mamita ny fijinjana, ny famoloana, ny fisarahana, ny fanadiovana ary ny asa hafa indray mandeha. Ny masinina dia manana rafitra matevina, fandidiana mety, fandidiana malefaka, fahombiazana avo lenta ary vola haingana. Engine Famaritana ara-teknika Herinaratra mifanaraka amin'ny kw 110 Dimy ankapobeny (L * W * H) mm 6740 * 2940 * 3380 Milanja total kg 5640 ...
Product Detail Ny masinina mijinja katsaka 4YZ-4B / 3B dia karazana masinina mijinja katsaka miorina amin'ny fidiran'ny teknolojia mandroso ao an-toerana sy any ivelany an'ny mpijinja. Vaovao ity milina ity, ary afaka mamita ny fizotran'ny asa rehetra manomboka amin'ny fakana katsaka, fampitana, fikoropahana ary famonosana ka hatramin'ny fanapahana mololo sy ny fanodinana indray mandeha. Ampiasaina manokana hijinjana ny katsaka. Famaritana ara-teknika Model 4YZ-4B throughput ...